प्रधानमन्त्रीज्यू, नक्सा र राष्ट्रवादलाई तुच्छ स्वार्थका निम्ति ढाल नबनाउनुहोस् ! « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
प्रधानमन्त्रीज्यू, नक्सा र राष्ट्रवादलाई तुच्छ स्वार्थका निम्ति ढाल नबनाउनुहोस् !
प्रकाशित मिति : २०७७, १५ असार सोमबार २०:४६
नक्सा र राष्ट्रवादलाई तुच्छ स्वार्थका निम्ति ढाल नबनाउनुहोस् ! तपाईंको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पदको गरिमा र मर्यादा मात्र गुमेको छैन, देशलाई अपूरणीय कूटनैतिक क्षति पुगेको छ ।
तपाईंलाई भूमि फिर्तासँग होइन, देशका गम्भीर मुद्दा र समस्यासँग होइन, आफ्नो कुर्सीसँग मात्रै मोह छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ र जग्गा फिर्ता आउन सक्ने कूटनैतिक ढोकाहरू आफै बन्द गर्न तम्सिनुभएको छ ।
हामीलाई गुमेको भूमि चाहिएको हो, कसैको कुर्ची बचाउन कुनै देशसँग सोझो द्वन्द्व या दुश्मनी चाहिएको होइन ।
–संसदीय समितिले एकमतले नक्सा सच्याउन दिएको निर्देशन तपाईंले ‘भूमि फिर्ता ल्याउने हो, नक्सा त केही पनि होइन’ भनेर धेरै महिना टार्नुभो ।
–नक्सा सार्वजनिक गर्न सदनदेखि सड़कसम्मको तीव्र दबाब थियो, समर्थन थियो ।
–सरिता गिरी प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन । अन्यले त तपाईंले जस्तै नक्साको पक्षमा भोट दिएकै हुन् ।
–तपाईंमाथि सच्चिन या ठाउँ खाली गर्न दबाब शुरू भएको नक्साका कारण होइन, नक्साभन्दा धेरै अघि राष्ट्रपति भन्ने संस्थालाई खेलौना बनाएर लहड़मा ल्याएको अध्यादेशका कारण हो । पूर्व प्रहरी र सांसदलाई लकडाउनकै बीचमा मान्छे उठाउने धन्दामा लगाउने तपाईंको निकृष्ट खेलका कारण हो ।
–सबैलाई जोडेर कोभिड़का आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्यगत समस्याहरूसँग लड्नुपर्ने बेला पार्टी फुटाउने धन्दामा लाग्ने, खरिदलगायतका अनियमिततालाई आफै ढाकछोप गर्ने र मैंमात्रै सर्वज्ञ हुँ भन्ने अहङ्कार पाल्ने स्वभावले गर्दा हो ।
–लोकतान्त्रिक दलको अध्यक्ष हुँ भन्ने र दलको बैठक बोलाउन समेत नदिने, बल्लबल्ल आयोजित बैठकमा एकोहोरो आत्मप्रसंशा मात्रै गर्ने र अरूलाई नसुन्ने तानाशाही प्रवृत्तिले गर्दा हो ।
–सबैभन्दा ठूलो कुरो, कुरो मात्रै गर्ने तर काम नगर्ने तपाईंको दिक्कलाग्दो चरित्र र चर्को भाइभतिजावाद हो ।
–आफू पढ्दै नपढ्ने तर अरूलाई नपढेको आरोप लगाउने तपाईंको बानीले हो । एमसिसीमा तपाईंले पचास अर्बको ठाउँमा पाँच सय अर्ब आउँदै छ भनेर झुटो तथ्याङ्कमा भाषण गर्नुभो तर यसको विरोध गर्नेहरूलाई पढ्दै नपढेको आरोप लगाउनुभो । तपाईंले आजसम्म कुनै एउटा गम्भीर विषयमा तथ्यपूर्ण मन्तव्य दिनुभएको छैन ।
–तपाईंका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि उठेको त्यत्रो भ्रष्टाचारको मुद्दालाई तपाईंले छानबिनसम्म हुन दिनुभएन । उल्टो त्यो अडियो नै नक्कली भएको भाषण गर्नुभो ।
–अहिले त सार्वजनिक खरिद ऐन नै सच्याएर आफू खुशी सोझै खरिद गर्न पाउने संशोधन संसदमा ल्याउन कस्सिनुभो ।
–वाइडबड़ीबारे संसदीय समितिले गरेको अध्ययनलाई तपाईंले स्वीकार गर्नुभएन । आफूखुशी आयोग बनाउनुभो । उसको म्याद सकिएको दुई वर्ष भयो । तलबभत्ताबाहेक त्यसले के प्रतिवेदन दियो भन्ने कहिल्यै सार्वजनिक गर्नुभएन ।